I-Ekodrom Estate ikumbindi weCroatia, iyure nje ukusuka kwipaki yesizwe yasePlitvice Lakes. Irhangqwe ngamabhoma kunye namahlathi anemibono emangalisayo yesibhakabhaka esineenkwenkwezi. Sinika iindwendwe zethu enye yezona ndawo zikhethekileyo zokuhlala kule ndawo, zonwabele zonke izinto zale mihla kwizindlu zethu ezenziwe ngamaplanga ezisanda kulungiswa.
Indawo entle yokuchitha iiholide, indalo ezolileyo kude nengxolo yezixeko eziphithizelayo kodwa ikufutshane ngokwaneleyo kwimilambo iMrežnica neKorana eneendawo ezininzi zokuqubha.
Indlu kaSparrow yindlu epholileyo nesebenzayo enembono yendawo evulekileyo. Kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala.
Ukusuka kumgangatho osezantsi onelanga kunye nonomoya ungangena kwiterrace entle ngokujonga igadi yeziqhamo. Ithafa lijikelwe emazantsi-empuma ngoko ke kukho iindawo ezininzi ezinelanga kunye nomthunzi owaneleyo apho unokonwabela ukutya ngaphandle.
Igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhamba ngeshawa kunye nendlu yangasese nayo ibekwe kumgangatho ophantsi.
Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa enokuthi iguqule ibe yibhedi ye-sofa ephindwe kabini, i-laptop friendly indawo yokusebenza kunye nendawo yomlilo. Kwigalari yomgangatho wokuqala kukho ibhedi yobukhulu bokumkani kunye nembono entle.
Ikhitshi lixhotyiswe ngezinto ezisisiseko zokusika, izinto zesilivere kunye nezinto eziyimfuneko zokupheka, ifriji & nesikhenkcisi esincinci, isitovu & ne-oveni kunye neketile yombane.
Iindwendwe zinokusebenzisa i-BBQ eqhelekileyo yangaphandle kumgama nje ombalwa.
Indlu ibonelelwa ngombane, amanzi abalekayo, uqhagamshelo lweWifi yasimahla, ukufudumeza umgangatho kunye neetawuli.
Kukwakho nomatshini wokuhlamba kunye nowomisa onokuwusebenzisa ngoncedo lwababuki zindwendwe.
Iindawo zokupaka zingaphaya kwendlela. I-estate ibekwe kwindawo ekwanti kwaye ethule kakhulu kuba indlela iphetha ngeemitha ezingama-500 ukusuka kwindlu kwaye akukho zithuthi.
Ecaleni kweNdlu yeSparrow kukho enye indlu eyenziwe ngamaplanga apho iindwendwe zihlala khona; kunye nendlu yehostele, ke ukuba ufuna naluphi na uncedo sikulungele kodwa siyayazi indlela yokuxabisa imfihlo yakho ukuba yinto oyithandayo.
Indlu ikwi-10 km ukusuka kwisixeko saseVojnić apho unokufumana izinto ezisisiseko njengeposi, i-ambulensi, iivenkile, iibhari kunye neemarike. Ukuthenga okubanzi ngakumbi sikucebisa ukuba uye kwisixeko saseKarlovac esikumgama oziikhilomitha ezingama-25.
I-Ekodrom Estate yiprojekthi eqhubekayo eyaqala ngo-2012 ngokusekwa kwe-Ekodrom Association kunye nokutyala imithi ye-organic plum kwi-7 hektare zomhlaba.
I-Association yaqalwa liqela labahlobo ngenjongo yokwabelana ngolwazi malunga nokuphila okuzinzileyo kwiindawo ezisemaphandleni zaseCroatia. Inxalenye yoko, i-Ekodrom iququzelele iiprojekthi ezininzi kunye neendibano zocweyo ezifana nomnyhadala we-Ekodrom, iindibano zocweyo zokuchwela, imfundo yegadi, umculo kunye nezifundo zeyoga, njl.
Kule minyaka mithathu idlulileyo ipropathi enye yezimbini yahlaziywa ngokupheleleyo yaze yajikwa yaba liqonga labakhenkethi le-Ekodrom Estate. Kungumnqweno wethu ukunika iindwendwe zethu ukuhlala okumangalisayo kweli lizwe lihle kwaye sibanike ulwazi malunga nokuhlala kwindawo enjalo kuyo yonke imisebenzi eyahlukeneyo kunye neendibano zocweyo.
Kwifama ungonwabela imisebenzi efana nokukha amakhowa kwihlathi elikufuphi, ufunde malunga nezityalo zeziqhamo, isicelo sokupheka, umculo okanye iindibano zocweyo zeyoga njl.njl.
Lo mhlaba unezindlu ezi-4 ebezikade zekaMakhulu uLjuba owachitha ubomi bakhe eBukovica. Enye indlu yayifudula iyithango ezinye ezimbini zizitali zeenkomo. Ngovuyo olukhulu kunye neeyure ezininzi zomsebenzi siye saguqula ezi zakhiwo zemveli zaba zizindlu zanamhlanje kwindawo emangalisayo enika uxolo lwengqondo kuye wonke umtyeleli ukuza kuthi ga ngoku!
Nangona umbindi weCroatia ungathandwa kakhulu phakathi kwabakhenkethi kunonxweme lwaseAdriatic, zininzi iindawo ezinomdla zokundwendwela kunye nezinto ezimnandi zokwenza. Isixeko "esilele emilanjeni emine", iKarlovac ikwisiqingatha seyure ngemoto. Imilambo iKorana kunye neMrežnica zibonelela ngeendawo ezininzi zokuqubha kunye nemidlalo yasemanzini. Ipaki yesizwe edume kakhulu iPlitvička Jezera ikwiyure nje enye ngemoto. Kwakhona, kukho iindawo ezikufutshane apho unokukhwela ihashe okanye ukukhwela ibhayisekile.
Kwindawo yethu unokonwabela ukuhamba okumnandi ehlathini, ukukha amakhowa kunye nezityalo ezityiwayo, ukufunda ngokulima ngezinto eziphilayo, ukulungiselela ukutya okumnandi kwi-barbecue enkulu okanye ukupholisa nje ukuba yinto yakho leyo.
Kwixesha elizayo elingekude siceba ukunika iindwendwe zethu ithuba lokuba yinxalenye yemisebenzi eyahlukeneyo kunye neendibano zocweyo eziququzelelwe ziingcali ukuze zikwazi ukwenza okona kulungileyo kokuhlala kwazo!
Indawo ezolileyo kakhulu enezindlu ezimbalwa kuphela kwiinduli ezijikelezileyo.
Siyavuya ukuba iindwendwe zethu zifuna ukunxibelelana nathi kodwa zinokunika iindwendwe zethu ubumfihlo ukuba zikhetha loo nto.